ကလိုစေးထူး: မြန်မာ အက္ခရာ စဉ်ကြမယ်...
ကျောင်းတုန်းက မြန်မာစာမှာ အဲဒါတွေ သင်ခဲ့ရဖူးတယ်။ “နာဖူးထပ်မံ” လို့ သဘောထားပြီး အစအဆုံး သေသေချာချာ ပြန်ဖတ်လိုက်ပါတယ်။ မြန်မာစာလုံးပေါင်း သတ်ပုံကျမ်းရဲ့ ရှေ့ဘက်စာမျက်နှာတွေမှာလည်း အက္ခရာစဉ်ဇယား ဆိုပြီး ဗျည်းစဉ် သရစဉ် အသတ်စဉ်တွေ တွေ့ရတယ်။
ကျမကတော့ အခုလောလောဆယ် မြန်မာစာသင်ပုန်းကြီးစာအုပ် ၀ယ်ပြီးတော့ကို ပြန်လေ့လာနေပါတယ်။ မြန်မာစာကို အခြေခံကျကျ လေ့လာလိုတဲ့အပြင် အောက်သက်ကျေအောင်လို့ပါ။
Jan 31, 2007, 3:54:00 AM
ကျွန်တော်ကို တော့ မြန်မာစာ ဖျက်တဲ့ကောင်လို့ ပြောမလားမသိဘူး ၊ တခါတရံမှာ စည်းကမ်း ဥဒေ သတ်မှတ်ထားတာ ကောင်းပေမယ့်၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာ စည်းကမ်း ဥပဒေတွေက လိုအပ်တာ ထက်ပိုနေရင် ချွန်ပးတာနဲ့ မတူတော့ဘူး တုံးအောင်လုပ် နေတာနဲ့ တူတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
အစ်ကိုတင်ပြလို့ ဗဟုသုတတော့ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကတော့ အဆင်ပြေ သလိုနဲ့ အလျှင်းသင့် သလိုရေးရတာ ကြိုက်တယ်။ ကိုယ်ရေးတဲ့ စာက အဓိပ္ပယ် ပြောင်းမသွားဘူး ဆိုရင်ပေါ့လေ။
Feb 1, 2007, 1:07:00 PM
ကိုစိုးဇေယျပြောတာကို ကျနော်သဘောကျတယ်ဗျ... အခုတင်လိုက်တယ်ဆိုတာကလဲ မြန်မာစာအက္ခရာတွေကို အစီအစဉ်တကျ စီတဲ့အခါ ဒီလိုတွေ စီတယ်ဆိုတာကို သိမီသလောက်လေး ပြောပြယုံသက်သက်ပါ။ ကျနော်လဲ နေရာတကာတိုင်း စည်းကမ်းဥပဒေနဲ့ လိုက်ရေးနေရတာကြီးကို မကြိုက်ဘူး။ သတ်ပုံဆိုရင်လဲ တချို့သတ်ပုံတွေကို စာအုပ်ကြီးအတိုင်းမရေးဘူး။ ကိုစိုးဇေယျပြောသလိုပေါ့ စာရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို သိသာစွာ ပြောင်းမသွားတာမျိုးလေးတွေပါ။
Feb 1, 2007, 4:20:00 PM
ဒါတွေကို မြန်မာတိုင်း သိသင့်တယ်ထင်ပါတယ်...
ကောင်းတာပေါ့ခင်ဗျာ...ကျနော်တို့ရဲ့ သဒ္ဒါကို ကျေညက်နေမယ် ဆိုရင် တခြားဘာသာစကားက သိပ်အခက်အခဲရှိတော့မယ်..မထင်ပါဘူး...
Feb 2, 2007, 10:22:00 PM
i just dont know what to said about this comment. I was of course finish education till 7th and being expeled from school. And what i am trying to said it, i dont think i learnt them during my elementary nor the high school..: Very sad to be burmese, cause i dont know much about burmese spelling. Is it normal for everyone like my age, or what about the new generation. Will they come across this type of lesson in school??
ဒီနေ့ဗျည်းသရနဲ့ပတ်သက်တာ ရှာရင်းနဲ့ဒါကိုဖတ်မိတယ်။ သိပ်ကောင်းတဲ့ပို့စ်လေးပါပဲ၊ ကျေးဇူးပါကိုကလို။
Jun 8, 2007, 10:41:00 AM